Russia inodzinga kusakura kuri kuita nharaunda yepasi rose nezvekuchengetedzeka kwehutachiwona - teles
Russia inodzinga kushushikana kuri kuwedzera kwenyika dzepasi rose pamusoro pechengeteko yekudzivirira
Russia yakadzora kushushikana kuri kuita nyika dzese pamusoro pechengeteko yekudzivirira kwayo gomarara reCovid-19 se "haina chigadziko zvachose."
NeChipiri, akataura kuti vaccine yakawana mvumo yekumatare mushure menguva isingasviki mwedzi miviri yekuongororwa kwevanhu.
Asi nyanzvi dzakakurumidza kuunza kushushikana nezve kumhanya kwebasa reRussia, uye runyorwa rwe nyika dziri kukura dzakaratidza kusava nechokwadi.
Masayendisiti kubva kuGermany, France, Spain neUnited States vese vakadana kuti vangwarire.
"Zvinoratidzika sekuti vatinoshanda navo vekunze vari kuona kukosha kwemushonga weRussia uye vari kuyedza kutaura pfungwa idzo ... dzisina chikonzero," Gurukota rezvehutano reRussia Mikhail Murashko akaudza indasitiri yenhau yeInterfax neChitatu.
Akawedzera kuti mushonga unowanikwa munguva pfupi.
"Mapaketi ekutanga echirwere chekurapa ... achagamuchirwa mukati memavhiki maviri anotevera, kunyanya kune vanachiremba," akadaro Murashko.
Vakuru veRussia vazivisa kuti vari kuronga kutanga vacccine muna Gumiguru.
Chiziviso cheChipiri chakaitwa nemutungamiri wenyika Vladimir Putin, uyo akati vaccine yakapfuudza macheki ese anodiwa uye mwanasikana wake anga atoriwana.
Asi World Health Organisation (WHO) yakati yanga iri muhurukuro nevakuru veRussia kuti vaongorore hutachiwana uhu, hunonzi Sputnik-V.
Haisi pamasangano easosaiti matanhatu ekuvhiyiwa asvika pachikamu chetatu ekuongororwa, izvo zvinosanganisira kuwedzera kwakawanda muedzo muvanhu.
Kufambira mberi kwaitwa neRussia kunoti kwavakaita pachirwere chekoronavirus chakasangana nekusagadzikana nevakuru vehutano nevezvenhau muUnited States neEuropean.
Gurukota rezvehutano kuGermany neChitatu vakaratidza kunetsekana kuti havana kuongororwa nemazvo.
"Zvinogona kuva nengozi kutanga kutemera vanhu mamirioni ... vevanhu zvekare, nekuti zvinogona kuuraya kugamuchirwa kwehutachiona kana zvikatadza," Jens Spahn akaudza venhau venzvimbo iyi.
"Kubva pane zvese zvatinoziva ... hazvina kuedzwa zvakakwana," akawedzera. "Hazvisi zvekuve kwekutanga imwe nzira kana imwe - ndezvekuti uve nemuchengetedzo wekudzivirira." "
Nhoroondo yevhidhiyoKatemera weCoronavirus: isu tiri padyo sei uye ndiani achachiwana?
Kumwe kunhu kuEurope, Isabelle Imbert, anotsvaga paCentral National de la Recherche Scientifique kuMarseille, akati kuvimbisa kurapa kwakanyanya kunogona kuve "nenjodzi".
"Hatizive maitiro kana mhedzisiro yedzidzo dzadzo dzekiriniki," akaudza Le Parisien.
Uye muUnited States, nyanzvi yepamusoro hutachiona munyika, Dr Anthony Fauci, vanoti havana chokwadi nezviri kutaurwa neRussia.
"Ndinovimba vanhu veRussia vanoratidzira pachena kuti vaccine yakachengeteka uye inoshanda," akaudza National Geographic. "Ini ndinokahadzika chaizvo kuti vakadaro." "
muzvinambiriIyo yekudzivirira haisati yapedzisa kudzidza kwakakura kunosanganisira zviuru zvevanhu
Zvichakadaro, iyo Moscow-based Association of Clinical Trials Organisation (Acto), iyo inomiririra makambani epasi rose emishonga muRussia, yakurudzira gurukota rezvehutano kuti rimise mvumo kudzamara mayedzo apera. chikamu chechitatu.
Mukuru weActo Svetlana Zavidova akaudza nzvimbo yeRussia kuti MedPortal kuti sarudzo yekudzivirira vanhu vazhinji yakaitwa mushure mekubvunzwa chikamu chekutanga neechipiri pavanhu makumi matanhatu nevaviri, uye zvakange zvisingakwanise kuvimbisa kushanda kweiyo mushonga pane izvi.
Asi dzimwe nyika dzakawedzera kuita zvakanaka pakaziviswa neMoscow.
MuPhilippines, Mutungamiriri Rodrigo Duterte akati aida kuyedza mushonga uyu.
"Ini ndinofunga kuti chekudziya chawaburitsa chakanakira vanhu," akadaro. “Ndichava wekutanga kusangana. "
Uye Israeri yakati ichatanga nhaurwa dzekuitenga kana zvikaita "zvakakomba chigadzirwa."
Chii chatinoziva nezve vaccine?
Masayendisiti ekuRussia anoti muyedzo wekutanga wekudzivirira wapedzwa uye kuti mhedzisiro yacho yakabudirira.
IYO Russian vaccine inoshandisa zvimedu zvakapatsanurwa zve adenovirus, hutachiona hunowanzo kukonzera kutonhora kujairika, kukonzeresa kudzivirira kwemuviri.
muzvinambiriMuna Chikunguru, masayendisiti eRussia akazivisa kuti kuyedza kwekutanga kwechirwere chakagadzirwa neGamaleya Institute kwakapera.
Asi kubvumidzwa kwehutachiona nevanodzora veRussia kunouya kusati kwapera kudzidza kwakakura kunosanganisira zviuru zvevanhu, inozivikanwa sedanho rechitatu.
Nyanzvi dzinoona idzi bvunzo sechinhu chakakosha pakuedza.
Nekudaro izvi, Mr Murashko vakataura neChipiri kuti gwisa "rakaratidzwa kuve rakanyanya kushanda uye rakachengeteka", vachiritema senge nhanho huru ku "kukunda kwevanhu" pamusoro peCovid-19.
Russia yakaenzana nekutsvaga kwekudzivirira neyemuchina mujaho wakakwikwidzwa neSoviet Union neUnited States munguva yeCold War.
Russia yakambopomedzerwa neUK, US neCanada kutsvaga kwekuba kutsvagurudza kwakabatana neCovid-19.
Anopfuura zana emachirongwa epasi rese ari mukubudirira, mamwe acho ari kuyedzwa pane vanhu vari mumakiriniki miyedzo.
Kunyangwe kufambira mberi nekukurumidza, nyanzvi zhinji dzinofunga kuti hapana mushonga wekuti uchawanikwa zvakanyanya kusvika pakati pe2021.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-europe-53751017
Chirehwa: Kubva Mbilia Bel naTshala Mwana, vaimbi vekuCongo vaenda kupi? - Vhidhiyo